KENKAN WƆ Abbey Afrikaans Ahanta Aja Albanian Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Assamese Attié Aukan Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Comorian (Ngazidja) Costa Rican Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dusun Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Catío) English Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Gitonga Gokana Greek Greek Sign Language Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guatemalan Sign Language Guerze Gujarati Gun Guna Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hungarian Sign Language Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Khasi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Latgalian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Maninkakan (Eastern) Mapudungun Marathi Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mauritian Creole Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mende Meru Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali New Zealand Sign Language Ngabere Ngangela Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Pilagá Polish Ponapean Portuguese Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Russian Russian Sign Language Rutoro Réunion Creole Salvadoran Sign Language Samoan Sango Saramaccan Sarnami Sena Senoufo (Cebaara) Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Susu Swahili Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai (Northeastern) Thai Sign Language Tigrinya Tiv Tlapanec Toabaite Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Bible Asuafo, afe 1870 mfe mu
Ɔwɛn-Aban a edi kan, afe 1879
Sɛnea Ɔwɛn-Aban no te nnɛ
Bible hyɛɛ nkɔm sɛ wɔ Kristo wu akyi no, akyerɛkyerɛfo atorofo bɛsɔre afi tete Kristofo no mu abekyinkyim Bible mu nokware no. (Asomafo Nnwuma 20:29, 30) Bere kɔɔ so no, saa pɛpɛɛpɛ na ɛbae. Wɔde abosonsomfo nkyerɛkyerɛ frafraa Yesu nkyerɛkyerɛ mu, na ɛde atoro Kristosom bae. (2 Timoteo 4:3, 4) Ɛnnɛ, yɛbɛyɛ dɛn atumi ahu paa sɛ yɛte nea Bible kyerɛkyerɛ ankasa no ase?
Bere dui sɛ Yehowa ma nokware no da adi. Ɔhyɛɛ nkɔm sɛ ‘nimdeɛ a edi mu bɛdɔɔso wɔ awiei bere’ no mu. (Daniel 12:4) Wɔ afe 1870 mu no, nnipakuw kakraa bi a na wɔrehwehwɛ nokware no behui sɛ asɔre nkyerɛkyerɛ pii nnyina Kyerɛwnsɛm no so. Enti, wofii ase sɛ wɔbɛyɛ nhwehwɛmu ahu nea Bible no kyerɛkyerɛ ankasa, na Yehowa boaa wɔn ma wɔtee kyerɛw nsɛm no ase.
Nnipa komapafo tɔɔ wɔn bo ase suaa Bible no. Ɔkwan a saa Bible Asuafo a na wɔwɔ koma pa a wodii kan no faa so suaa Bible no ara na yɛn nso yɛfa so sua Bible no. Ná wosusuw Bible mu nsɛm ho mmiako mmiako. Sɛ wohu Bible mu asɛm bi a ɛyɛ den ma wɔn sɛ wɔbɛte ase a, na wɔhwehwɛ Bible mu nsɛm foforo a ɛbɛboa wɔn ma wɔate ase. Sɛ wonya ntease a ɛne Kyerɛwnsɛm no mu nsɛm a aka hyia a, na wɔkyerɛw to hɔ. Bible no a wɔmaa ɛno ankasa kyerɛkyerɛɛ emu nsɛm ase no ma wɔsan huu Onyankopɔn din ne Ahenni no ho nokwasɛm, nea enti a Onyankopɔn bɔɔ nnipa ne asase, tebea a awufo wom, ne owusɔre ho anidaso no. Nhwehwɛmu a wɔyɛe no ma wɔdee wɔn ho fii gyidihunu ne nneyɛe bɔne pii ho.—Yohane 8:31, 32.
Eduu afe 1879 mu no, Bible Asuafo no hui sɛ bere adu sɛ wɔma wɔte nokware no ho asɛm wɔ wiase nyinaa. Enti wɔ saa afe no mu no, wofii ase tintim nsɛmma nhoma a yɛda so ara tintim no nnɛ a wɔfrɛ no Ɔwɛn-Aban Ɛka Yehowa Ahenni Kyerɛ no. Seesei, yɛreka Bible mu nsɛm a ɛyɛ nokware no ho asɛm wɔ aman bɛboro 239 so ne kasa bɛboro 700 mu. Ɛnnɛ paa ne bere a nokware nimdeɛ adɔɔso sen biara!
Kristo wu akyi no, dɛn na ɛbaa Bible mu nokware no so?
Dɛn na ama yɛatumi asan ahu Onyankopɔn Asɛm mu nokware no bio?